howto – OOTDMYANMAR
No Comments on DIY MOJITO
Are you missing the world of cocktails now? Maybe yes, because of the quarantine and — no because it can be overwhelming and expensive too. Also, in this COVID-19 era most of our favorite restaurants/bars are closed. So, if your craving for your favorite mojito cocktail — don’t worry, it’s not that complicated — it’s justafew swish away. Plus, you can save some kyats too!
Cocktails ကမ္ဘာကြီးကို လွမ်းနေကြပြီလား။ အိမ်အပြင်မထွက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် cocktail တွေက ဈေးကြီးလို့လား။ COVID-19 ကာလမှ အကြိုက်ဆုံး စားသောက်ဆိုင်တွေ၊ ဘားတွေ လည်း ပိတ်ထားကြပါတဲ့အတွက် သောက်နေကျ Mojito လေးကို တောင့်တလာပြီဆိုရင်… မပူပါနဲ့။ Cocktail တစ်ခွက်သောက်ရဖို့ အဲ့ဒီလောက် မရှုပ်ထွေးပါဘူး။ အချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာ ငွေကြေးသက်သာတဲ့ cocktail တစ်ခွက် ဖျော်စပ်နိုင်ပါတယ်။ ဖျော်စပ်နည်း Video လေးကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။
Sharing to you how we like our Mojito. PS There are different ways to make mojito AND this is just one of it. Straw @palumyanmar #ootdmyanmar #ootdmyanmareats #ootdmyanmarhowto
A post shared by OOTDMYANMAR 🇲🇲 (@ootdmyanmar) on Apr 22, 2020 at 10:50pm PDT
PS. Drink responsibly!
PS တန်ဆေးလွန်ဘေးမို့လို့ အလွန်အကျွံတော့မသောက်မိစေနဲ့နော်။
Tags howto, mojito, ootdmyanmar, youtube
HERE IS HOW TO MAKE THAT VIRAL DALGONA COFFEE
No Comments on HERE IS HOW TO MAKE THAT VIRAL DALGONA COFFEE
We also madeaburmese Dalgona version, and it’s super easy to do!
OOTD က Dalgona ကိုမြန်မာမှုပြုပြီး ဖန်တီးထားပါတယ်။ ဖျော်ရတာ အရမ်းလွယ်ကူတယ်နော်။
Dalgona coffee is named afterafamous Korean street candy of the same name in Korea, they call it ppopgi.
ကိုးရီးယားရဲ့ နာမည်ကြီး Street Candy ဖြစ်တဲ့ ppopgi ကိုအမှီပြုပြီး Dalgona လို့အမည်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
The dalgona asacandy is similar to toffee or honeycomb that’s placed onastick, but the now-viral caffeinated version as seen on TikTok and even on YouTube food channels isathree-ingredient sweet coffee-based froth you put on top of iced milk.
ကိုးရီးယားရဲ့ နာမည်ကြီး Street Candy ဖြစ်တဲ့ ppopgi ကိုအမှီပြုပြီး Dalgona လို့အမည်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Dalgona candy ဟာဆိုရင် toffee ဒါမှမဟုတ် ပျားအုံလိုပုံစံမျိုးရှိပြီး တုတ်ချောင်းပေါ်မှာကပ်ထားတာပါ။ ဒါပေမယ့် အခုတလော TikTok နဲ့ Youtube က အစားအစာ channel တွေမှာ နာမည်ကြီးနေတာကတော့ ချိုမြတဲ့ကော်ဖီ နဲ့ နို့အေး တို့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ Dalgona ကော်ဖီပဲဖြစ်ပါတယ်။
How to make dalgona coffee:
Dalgona ကော်ဖီ ကိုဘယ်လိုဖျော်စပ်ကြမလဲ။
All it takes is three ingredients: instant coffee, sugar, and hot water. How much more simple can it get?
Instant coffee သကြား နဲ့ ရေနွေး သုံးမျိုးပဲလိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ကယ်ကိုရိုးရှင်းတယ်နော်။
Watch our video to see how it goes:
ဘယ်လိုဖျော်စပ်ရလဲဆိုတာသိရဖို့ video လေးကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်။
If you are bored at home, then why not try #dalgonacoffee ? Make sure to tag us ♥️ Our favorite bamboo straw from @palumyanmar #Ootdmyanmar #ootdmyanmarvideo #ootdmyanmarigtv #ootdmyanmareats
A post shared by OOTDMYANMAR 🇲🇲 (@ootdmyanmar) on Apr 5, 2020 at 1:55am PDT
Once the fluffy coffee froth is ready, you can placeadollop of it on top of iced milk. There you have it! You have successfully made dalgona coffee at home.
ကော်ဖီမှုန့်တွေ အားလုံးကျေပြီး ပျော်သွားပြီဆိုရင်တော့ နို့အေးပေါ်မှာ လောင်းချလိုက်လို့ရပါပြီ။ ကဲ ပြီးသွားပါပြီ။ Dalgona ကော်ဖီကို အိမ်မှာပဲ ကိုယ်တိုင် အောင်မြင်စွာ ဖျော်စပ်နိုင်သွားပါပြီ။
*This story originally appeared on previewph and Minor edits have been made.
*previewph တွင်ဖော်ပြထားသော အကြောင်းအရာကို အနည်းငယ်ဖြည့်စွက်ထားပါသည်။
Tags howto, ootdmyanmar, ootdmyanmareats, review
Join 106,519 other followers